Fomba fijery afrikanina amin'ny famerenan'ny mpiara-mianatra: adihevitra boribory - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 15th September 2021 15th September 2021
AfricaArXiv, Eider Africa, TCC Africa, ary PREreview Faly mandray ny adihevitra amin'ny latabatra maharitra 90 minitra, hitondra ny fomba fijery afrikanina amin'ny resaka eran-tany mandritra ity taona ity ' Herinandron'ny famerenana ny mpiara-mianatraLohahevitr'ilay lohahevitra, “Identity sur le Peer Review”. Miaraka amin'ny tontolon'ireo mpampanonta afrikana, mpandinika ary mpikaroka asa vao haingana, hizaha ny mombamomba ireo mpikaroka ao amin'ny kaontinanta afrikanina, avy amin'ny fomba fijery mibaribary izay mahita azy ireo ho mpanjifa fahalalana voavokatra amin'ny toe-javatra hafa ho an'ireo mpikaroka izay mirotsaka an-tsehatra. amin'ny fanadihadian'ny mpiara-mianatra. Hiezaka izahay hamorona toerana azo antoka hisaintsainana ny olan'ny fahalalàn'ny fahalalàna ny siansa, ny fitongilanana amin'ny famerenan'ny mpiara-belona ary ny fomba fanavahana ny mpandinika ny mpiara-miasa.
Ny mpanelanelana dia hanasa mpandahateny hampahafantatra ny tenany sy hizara ny zavatra niainany, ny loharano ary ny lesona nianarany tamin'ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny fizotry ny fandinihan'ny namana. Aorian'ny fanoloran-kevitry ny mpandahateny vahiny dia hiditra amin'ny fivoriana Q&A antonony isika izay anasana ireo mpandray anjara amin'ny latabatra hametraka fanontaniana, hanome hevitra ary hifampiresaka amin'ireo mpandahateny.
Rahoviana ny hetsika?
2 hariva - 3:30 hariva GMT | 3:4 - 30:XNUMX hariva Wat | 4 hariva - 5:30 hariva CAT | 5 hariva - 6:30 hariva EAT
Momba ireo mpandahateny
Dr. Raoul Kamadjeu - Mpiara-manorina sy mpitantana tonian-dahatsoratra ao amin'ny Gazety fitsaboana Pan-Afrikana - PAMJ
Dr. Raoul Kamadjeu dia mpitsabo, mpiara-manorina ary tonian-dahatsoratry ny Pan African Medical Journal, trano famoahana fidirana malalaka izay monina any Kenya sy Kamerona. Dr. Kamadjeu dia nahazo ny mari-pahaizana mpitsabo tao Kamerona, nahavita ny Master's in Public Health any Belzika (ULB), ary vao niditra ho Ph.D. programa amin'ny Epidemiology miaraka amin'ny University University of New York.
Dr. Stella Onsoro - Mpikaroka sy psikology klinika ao amin'ny Kenya Power and Lighting Company - KPLC
Dr. Stellah Osoro Kerongo dia psikology klinika ary mpikaroka monina ao Nairobi, Kenya. Izy dia psikolojika klinika voaofana manana traikefa matihanina amin'ny torohevitra, coaching ary mentorship. Manana fahaizana manokana amin'ny tenin'ny tanana izy, manam-pahaizana manokana amin'ny fanombanana ara-psikolojika, fitsaboana ary fitsaboana amin'ny alàlan'ny modely fitsaboana multidimensional. Manana traikefa 10 taona mahery tamin'ny fanolorana serivisy torohevitra izy.
Nicholas Outa - Kandidà Doctorat amin'ny jono sy fiompiana anaty rano ao amin'ny oniversite Maseno
Andriamatoa Nicholas Outa dia Kandidà Doctoral amin'ny sehatry ny jono sy ny fiompiana anaty rano ao amin'ny Maseno University, Kenya. Nahazo mari-pahaizana Master of Science (MSc) amin'ny Limnology sy Wetland Management avy amin'ny UNESCO-IHE, Netherlands, BOKU University, Austria, ary Egerton University, Kenya. Manana BSc koa izy. Siansa anaty rano ampiasain'ny Egerton University, Kenya. Andriamatoa Outa dia namoaka lahatsoratra siantifika maherin'ny 25 tao amin'ny diary nodinihin'ny namana. Amin'izao fotoana izao dia mpanazatra amin'ny siansa sy ny serasera siantifika ao amin'ny Ivotoerana fiofanana momba ny serasera (TCC-Africa) izy ary mpanolo-tsaina ho an'ny mpikaroka asa am-boalohany any amin'ny oniversite sy oniversite samihafa izay anaovany lahateny. LinkedIn
Prof. Ruth (BARWA) Oniang'o PhD - Tale jeneraly sady mpanorina ao amin'ny Gazety Afrikana misahana ny sakafo, fambolena, fanjarian-tsakafo ary fampandrosoana (AJFAND)
Dr. Ruth Oniang'o dia mpampianatra, mpikaroka, African Food Prize Laureate ary nomem-boninahitra avy amin'ny governemantan'i Kenya manokana noho ny asany hamongorana ny fahantrana sy ny hanoanana any Kenya, amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo tantsaha kely ao anatin'ny 3 taona lasa ary nanampy tamin'ny mamolavola politika momba ny fiarovana ny sakafo sy ny sakafo. Nahazo ny medaly volafotsy sy medaly serivisy natokana ho an'i Kenya izy. Nanangana ny Rural Outreach Africa (ROA) i Ruta tamin'ny voalohan'ny taona 1990 ary manohy ny feo mazava sy lalina amin'ny fikarohana ho an'ny fampandrosoana ho mpanolo-tsaina sy mpandahateny iraisam-pirenena. Amin'ny maha mpanorina sy tonian-dahatsoratry ny Gazety Afrikana misahana ny sakafo, fambolena, fanjarian-tsakafo ary fampandrosoana (AJFAND), dia mikasa ny hanatsara ny politika sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanaparitahana fikarohana ara-tsiansa manan-danja sy ireo haitao mipoitra eo amin'ny sehatra i Ruth, ary noho izany dia miasa amin'ny kaontinanta sy manerantany. Manamarika ny 20 taona ity gazety ity tamin'ny 2021 hatramin'ny nanombohany.
Momba ny Herinandron'ny famerenan'ny peer
Peer Review Week dia hetsika eran-tany notarihin'ny vondrom-piarahamonina virtoaly nankalazana ny andraikitra tena ilaina amin'ny famerenan'ny mpiara-mianatra ny kalitao siantifika. Ny hetsika dia mampivondrona olona, ​​andrim-panjakana ary fikambanana tapa-kevitra ny hizara ny hafatra afovoany fa ny famerenan'ny mpiara-mianatra tsara, na endrika inona na endrika mety hisy, dia manakiana ny fifandraisana ara-pahaizana.
Hevitra famerenana ny mpiara-mianatra herinandro 2021 Lohahevitra: Famantarana amin'ny famerenana ny mpiara-mianatra
Amin'ity taona ity Herinandron'ny famerenana ny mpiara-mianatra (PRW), hetsika fanao isan-taona tarihin'ny mpanonta akademika, andrimpanjakana, fiarahamonina ary mpikaroka, dia hatokana ho an'ny lohahevitra "Identity amin'ny Peer Review." Mandritra ny herinandron'ny 20 septambra 24, ny fikambanana mandray anjara dia hikarakara hetsika virtoaly sy hetsika hanasongadinana ny anjara asan'ny maha-izy azy manokana sy ara-tsosialy amin'ny famerenan'ny mpiara-belona sy ny fomba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina manam-pahaizana mivelatra amin'ny fomba fanao isan-karazany, ara-drariny ary eken'ny mpiara-mianatra.
Momba ny mpampiantrano
Eider Africa dia fikambanana iray izay manao fikarohana, mamolavola drafitra ary mampihatra fandaharam-pianarana ho an'ny mpikaroka miasa an-tserasera sy ivelan'ny Internet ary ho an'ny manam-pahaizana atsy Afrika. Manofana mpanolo-tsaina izahay hanombohana ny fandaharan'asan'izy ireo. Mino izahay fa mianatra ny peer to peer, mianatra ny fikarohana amin'ny fampiharana, mikarakara ny mpikaroka manontolo ary ny mianatra mandritra ny androm-piainany. Nanjary vondrom-pikarohana mpikaroka mahery vaika izahay tao amin'ny klioban'ny diarin'ny fikarohana ary niara-niasa tamin'ny mpampianatra mpampianatra oniversite mba hampivelatra ny fiofanana momba ny fikarohana. Ny tranonkalantsika: https://eiderafricaltd.org/
Sokajy:	Fampandrenesanafiaraha-miasaEventPeer Review
Tags: Eider AfricaHerinandron'ny famerenana ny mpiara-mianatraPREreviewmpanao gazetyTCC Africa
Eider Africa PREreview, AfricArXiv, ary TCC Africa dia namolavola taranja mba hampidirana mpikaroka afrikanina bebe kokoa amin'ny famerenan'ny mpiara-mianatra - AfricArXiv	· 7 Desambra 2021 amin'ny 3:35 maraina
[…] Ny tetikasa dia manaraka andiana atrikasa misy fizarana telo ary koa fifanakalozan-dresaka an-databatra boribory vao haingana nokarakarain'ny TCC Africa, Eider Africa, AfricArXiv, ary PREreview ary mifanaraka amin'ny […]